တရုတ် စည်သွတ် အစားအစာ သစ်သီး ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပြုပြင်ရေး စက်ပစ္စည်း စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
စည်သွတ် အစားအစာ သစ်သီး ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပြုပြင်ရေး စက်
စက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်အရ အရွယ်အစား ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
တစ်လလျှင် စည်သွတ်ဘူး အစားအသောက် စက်ပစ္စည်း ၁၀ ခု/အစုံ
1. တည်ငြိမ်သော သစ်သားအထုပ်သည် စက်ကို ရိုက်ချိုးခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။2.ဒဏ်ရာ ပလပ်စတစ်ဖလင်သည် စက်ကို စိုစွတ်ပြီး ချေးမတက်အောင် ထိန်းပေးသည်။3.မီးခိုးငွေ့ကင်းစင်သော ပက်ကေ့ချ်သည် ချောမွေ့သော အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုကို ကူညီပေးပါသည်။4.အထုပ်မပါဘဲ ကွန်တိန်နာတွင် အရွယ်အစားကြီးသော စက်ကို ပြုပြင်ပေးပါမည်။
30% ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 30 ရက်
1. ထုပ်ပိုးခြင်း။သံဖြူဗူးများ၊ ဖန်ပုလင်းများ အစရှိသည်ဖြင့်၂။ စာကြောင်းတစ်ခုလုံး ဖွဲ့စည်းမှု။ကုန်ကြမ်းရွေးချယ်ခြင်း → သန့်ရှင်းရေး → အခွံခွာခြင်း → တူးထားသော နျူကလီးယား → တစ်ဝက်သို့ ဖြတ်တောက်ခြင်း → အအေးခံခြင်း → ခွဲထုတ်ခြင်း → စည်သွပ်ဗူး၊ သကြားရည် → အိပ်ဇောထည့်ခြင်း၊ အလုံပိတ် → ပိုးသတ်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း → အကာအကွယ် → စစ်ဆေးခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း ဗူးခွံများ → တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း
* စက်တပ်ဆင်နည်းသင်တန်း၊ စက်အသုံးပြုနည်းသင်တန်း။
* နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် စက်ယန္တရားများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ။
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- စံထုပ်ပိုးမှု တင်ပို့ခြင်း။
Delivery Detail : ရက် 90 အတွင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏ တောင်းဆိုမှုနှုန်း
ယခင်- စည်သွတ် နာနတ်သီး ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အလိုအလျောက် ပျော့ပြောင်းသော သကြားလုံးလုပ်စက် 50kg/h...
အလိုအလျောက် လတ်ဆတ်သော ပြောင်းဖူးထိန်းသိမ်းမှု ထုတ်လုပ်မှု လီ...
အဆီထုတ်/မုန့်အပြည့် နို့မှုန့်/အမျိုးသမီး/ Baby Mi...
ပြင်သစ် Baguette / မုန့် / အချိုပွဲ / ကိတ်မုန့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
သေးငယ်သော စကေးတစ်ပိုင်း အလိုအလျောက် အခြောက်ခံ သစ်သီး ထုတ်ကုန်...